इतिहासकै संगीन मोड .... - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
इतिहासकै संगीन मोड ….
इतिहासको अत्यन्तै संगीन मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिमा अहिले आग्रहहरु हलक्क मैलाएका छन् र फेरि प्रतिबद्धता, कट्टरता र महत्वकांक्षाकाबारे चर्चा चलेका छन् । त्यसले पार्ने प्रभाव सामान्यकालको जस्तो हुने छैन देश र भावी पिँढीको भाग्यसँग पनि जोडिनेछ । तर आदर्शहरु भावना बनाएर उरालिँदा अहंकारले शक्ति पनि बनाउँछ । त्यसले दीर्घकालिन असर राख्न नसके पनि तत्कालमा प्रभाव भने छोड्छ ।
प्रतिबद्धता र कट्टरता भनेका उस्तै–उस्तै शब्द लागेता पनि त्यसको अर्थ, मर्म र त्यसले निर्माण गर्ने जीवनचरित्र र पार्ने प्रभाव भने फरक–फरक हुन्छन् । प्रतिबद्धता सृजना हो, जीवन लक्ष हो, भने कट्टरता अहंकार हो । कट्टरताले सृजनात्मक क्षमताको नसबन्दी गरिदिन्छ र आफैँमा केन्द्रित हुँदै रमाउँछ । आपूm बाहेकलाई निषेधको मनोविज्ञान हुन्छ । अझ कृयामा नभई प्रतिकृयामै रमाउँछ र जीवनको चालक शक्ति यसैलाई बनाउन पुग्छ ।
अझ कुमार अजुंमले यसबारे सटिक विश्लेषण गरेका छन् – प्रतिबद्धतालाई लिएर केही मान्छेहरु प्रतिबद्ध हुनु नै कट्टर हुनु हो भन्छन् । जबकी सिधा र साँचो कुरा चाहिँ यस्तो हो – प्रतिबद्धता समझदारीबाट पैदा हुन्छ भने कट्टरता अज्ञानताले । प्रतिबद्धताले वैचारिक गतिशीलता खोज्दछ भने कट्टरता जसरी पनि आफ्नै विजयमा मख्ख पर्छ ।
प्रतिबद्धताले दृढता र आत्मविश्वास पैदा गर्दछ भने कट्टरताले घृणा, संकीर्ण श्रेष्टीभाव । प्रतिबद्ध हुनुको कारण तपाईं कसैलाई पनि व्यक्तिगत शत्रु मान्नुहुन्न् तर कट्टर हुँदा तपाईको सोच बाहेकको मान्छेलाई शत्रु व्यवहार गर्नुहुन्छ । प्रतिबद्धता सामूहिकताको सृजनात्मक हतियार हो भने कट्टरता विध्वंसात्मक औजार । प्रतिवद्धताले जिम्मेवार नागरिक बनाउँदछ भने कट्टरताले अराजक । जो प्रतिबद्ध हुन चाहँदैनन् उनीहरु कुतर्क गरेर कट्टरता र प्रतिबद्धता भनेका समान अर्थी हुन भन्छन् ।
कट्टरता भनेको भइरहेको र नजीरलाई निरन्तरतालाई कायम गर्न मात्र चाहन्छ । विटुलो होइएला कि भन्ने मनोत्रासमा हुन्छ । यहाँ यस्तो भएको थियो, यस्तो लेखिएको छ, हिजो यस्तो भनिएको थियो, त्यसैले यस्तो गर्नुपर्छ र यस्तो गर्नु भनेको कहाँ लेखिएको छ ? कस्ले बोलेको र कहिले कहाँ गरिएको थियो भन्ने पुराना कुरा समात्ने गर्दछ । २४ क्यारेटको उम्दा माल सावित गर्न आदर्शका गफ गर्छ । त्यसैले बदलिएको अवस्थाको नाडी छाम्न सक्दैन् । यो यथास्थितिको रक्षक र पोषक पनि हो । त्यसैले प्रगतिशील रुढिवाद यसका आधार हुन् । शब्दमा प्रगतिशीलता र व्यवहार एवम् आवरणमा रुढता यसका विशेषता हुन् । समस्याको हल जहिले पनि इतिहासका पुस्तकमा खोज्छ । आग्रहले चलेका मान्छेहरु कट्टरताका कर्मकाण्डी हुन् । त्यसैले उनीहरु कुनै निर्णय गर्दा निर्णयसिन्धु पल्टाउने गर्छन् वा कुनै यात्रा र काम थालनी गर्दा मुहुर्त चिन्तामणी हेरेर जोखना निकाल्छन् । कट्टरता समाजमा छोइछिटो गर्छ र अहंकारले भरिएको हुँदा आफै राम्रो र शुद्ध भनेर अरुलाई अपमान र गाली गर्दा मख्ख पर्छ । शत्रु र मित्रुको पहिचान गर्न सक्दैन । उत्तेजनामा रमाउँछ र आवेगमा हाँकिन्छ । पछुवाहरुमा विवेकको नभई आवेगको पट्टी बाँधेर आँखा देख्ने धृतराष्ट्रमा फेरिदिन्छ ।
महत्वाकांक्षा भनेको अणु र परमाणु बम जस्तै सृजना र ध्वंस्त गर्ने मानवीय शक्ति हो । हरेक मानिसमा अन्तरनिहित ऊर्जा भनेकै महत्वाकांक्षा हो । महत्वकांक्षा क्षमता भएका मानिसले राख्छन् भने त्यो सकारमा फेरिन्छ । यदि क्षमता नभएकाहरुले उग्र महत्वकांक्षा राख्छन् भने कुण्ठामा फेरिन्छ । कुण्ठाग्रस्त मान्छे आफैँलाई छिपाउन या त उग्र आदर्शका गफ खोक्न थाल्छ अन्यथा अर्कालाई गाली गरेर सन्तुष्टि लिन्छ । आफ्ना महत्वाकांक्षाको बाधक र क्षमताको विकासमा अवरोधक पात्र खडा गरेर उसलाई सराप्दै जिन्दगी लतार्छ । कहिलेकाहिँ क्षमताहीन महत्वकांक्षीहरुले पनि समाजमा अत्यन्तै ठूलो अवरोध खडा पनि गरिदिन्छन् ।
इतिहासले प्रतिबद्ध, कट्टरता र सकार महत्वाकांक्षी नकार कुण्ठाका मनोरोगीहरुलाई लिएर आफ्नै गतिमा यात्रा गरिरहेको हुन्छ ।
<li><a href='http://www.kavretimes.com.np/?p=114' rel='bookmark' title='Example post 1'>Example post 1</a></li>
<li><a href='http://www.kavretimes.com.np/?p=113' rel='bookmark' title='Example post 2'>Example post 2</a></li>
<li><a href='http://www.kavretimes.com.np/?p=112' rel='bookmark' title='Example post 3'>Example post 3</a></li>
<li><a href='http://www.kavretimes.com.np/?p=111' rel='bookmark' title='Example post 4'>Example post 4</a></li>
<li><a href='http://www.kavretimes.com.np/?p=110' rel='bookmark' title='Example post 5'>Example post 5</a></li>